"Campos de Castilla", iyo nyanzvi yeAntonio Machado | Zvazvino Zvinyorwa
Kuongorora kwe «Campos de Castilla»
"Campos de Castilla" Ndiro rinonyanya kuzivikanwa basa remunyori anopenya weSevillian Antonio Machado uye rakaburitswa muna 1912, kunyangwe rakazowedzerwa kwapera makore mashanu gare gare, muna 1917. Munyori uye nharaunda vanotaura zvakawanda nezvake iye munyori, rudzi rwevanhu mune zvese uye nhoroondo yeSpain.
Muchokwadi, iyo kuora kwenyika zvinonzwikwa mutsananguro dzekufungisisa dzemunyori dzedzimwe nzvimbo kana kunyangwe hunhu hwevamwe vanhu. Zvakavanzika zvehupenyu kana nemanzwiro echitendero mamwe madingindira ari mubhuku rakadzama umo Machado anofumura mweya wake kuti aburitse zvese zvinomunetsa kana kumunetsa nenzira yakajeka.
Kufa kwewaanoda Eleanor zvinonzwika munhetembo nomwe dzinoumba bhuku iri. Uye zvakare, kumwe uye kuona kunopa mukana wekunaka uye nehunyanzvi puns inomiririrwa kunyanya mu "Mifananidzo." Idzo "Zvirevo nenziyo" zviri padyo padyo neuzivi hwekuMabvazuva maererano nehupfupi hwavo uye nehanya, dzimwe nguva uchiyeuchidza nhetembo dzeJapan kana dzeChinese.
Zvakare mubhuku iri mune rudo rwakawandisa rwakadanwa runonzi "Nyika yeAlvargonzález", yenyaya yechiratidziro inoratidzirwa nhamo dzemunhu, mune ngano umo kushuva nemakaro hazvinzwisise hukama.
Pekupedzisira tichataura kuti pamusoro pemigwagwa, nzizi uye makungwa ndiwo maviri makuru zviratidzo chebasa, kuva hupenyu hwenzizi nemakungwa zvinowirirana nechimwe chinhu chakazara uye chisina muganho mune izvo vamwe vatsoropodzi vakatenda kuti vaone chimiro chaMwari.
1 Nzvimbo yeCampos de Castilla
2 Anonyora sei Antonio Machado Campos de Castilla
3 Mavara eCampos de Castilla
3.6 Vasikana mukuwasha
4 Chii icho munyori anoda kuburitsa semhedzisiro?
5 Nei uchifanira kuverenga Campos de Castilla
Nzvimbo yeCampos de Castilla
Mamiriro ezvinhu eCampos de Castilla basa rinoitika muCastilla, kunyanya mumusha, Vinuesa neMuedra, padhuze neCidones. Muchokwadi, kune maguta akati wandei ataurwa, kunyanya nemunin'ina uyo ndiye akafamba nyika achidzoka kumba zvakare. Iyo chaiyo nguva inoitika nyaya yacho haizivikanwe, asi iyo inotipa isu chikamu chenhoroondo mairi chaimo zvinoenderana nekutumira, tsika uye hupenyu hwekuchengetedza. Maari, kukudzwa uye kukudzwa manzwiro maviri akakosha anotsanangura vanhu.
Pamusoro pezvo, munyori anonongedzera kuti zviito zvevarume zvinogona kukanganiswa nezvakataurwa kana kutaurirana nevakadzi vavo, saka kusahadzika kuti ndiani chaizvo aive pfungwa yekugumisa baba vemhuri.
Munhoroondo yese, chiitiko icho chakaitika neimwe nzira chinoshandura vatambi vari mumutambo, vachiumba nzira yavo yekuve uye vachijairana nezvavakaita.
Anonyora sei Antonio Machado Campos de Castilla
Campos de Castilla yakanyorwa mumunhu wechitatu. Iine murondedzeri ari iye anotaurira nyaya pasina kupa chero pfungwa kana manzwiro pamusoro pezviri kuitika, kunyangwe kana izvo zvaanonyora zvikaongororwa, ari kuratidza zvaari kunzwa nenzira yakavharidzirwa.
Mitsara ipfupi uye yakatsiga kwazvo. Kunze kwekutsanangurwa, zvimwe zvese inotsvaga kutaura zvakawanda nemazwi mashoma. Izvi zvinodaro nekuti ibasa mundima, saka yaifanirwa kutongwa nezvidimbu zverudo.
Pakutanga, rangano yenyaya yacho inoyevedza uye inokurumidza, asi munyori akazviita kuti asvike chaizvo kuumhondi sezvo, kubva ipapo, basa rese rakanangidzirwa kuhupombwe ihwohwo nemhedzisiro yainayo kune vatambi.
Kana riri basa, rakakamurwa kuita zvikamu gumi, chimwe nechimwe chakanzi nenzira inoshanda sechinhu chekutanga chekuudza izvo zvichataurwa mune yega yega.
Mavara eCampos de Castilla
Basa ra Antonio Machado Ipfupi, zvisinei, izvo hazvitadzise kuti kune akati wandei mavara anokosha uye kuti zviri nyore kuziva, kwete chete padanho repanyama (chimwe chinhu chisingatsanangure zvakawandisa), asi zvakanyanya mukati, kuziva izvo inofamba imwe neimwe.
Saka, pakati pavo pane:
Uyu zviri pachena ari protagonist wechikamu chekutanga chebasa, uyezve baba vevamwe vatambi. Izvo hazvireve kuti zvinongowanikwa chete mune yekutanga, asi kuti zvakare inoonekwa muchikamu chechipiri, asi pamweya kana kunyangwe mweya.
Hunhu hunopihwa nemunyori kuna Alvargonzález ndewe a murume anotsvaga kuita zvese zvinobvira kuti mhuri yake igare zvakanaka uye hapana kana chimwe chavanoshayiwa. Kwaari, mhuri ndicho chinhu chakanyanya kukosha. Mukuwedzera, isu tinotaura nezvemunhu akatendeseka uye anoda wake.
Mukadzi waAlvargonzález haana chinzvimbo chakamiririra muCampos de Catilla, asi ari wechipiri. Mukuwedzera, sezvo nyaya ichifambira mberi, kunyangwe ichionekwa panguva dzakasiyana, chokwadi ndechekuti munyori anowedzera icho kune a kusuwa pakurasikirwa nemurume wake akapondwa.
Ehezve, izvi zvinogona zvakare kuonekwa neimwe nzira, nekuti kana tisati tataura kuti Alvargonzález aive murume aipa zvese zvemhuri yake, uye aive murudo, chokwadi chekuti mukadzi wake akamurasa chinogona kududzirwawo sekuti aive arasikirwa chirevo chake chehupenyu, kumunhu waakada uye waakada zvakanyanya, uyo asingazive mafambiro aanoenda asina iye.
Juan ndiye dangwe, dangwe. Asi zvakare imwe yemhondi dzababa vake. Zvisinei nechidakadaka chaakapihwa izvi, munyori anotomiririra hunhu hwausina hunhu hwekutanga naye. Iye anotaura nezvake achimutsanangura iye ane gwenzi huso uye aine mashoma kwazvo tsika.
Munhoroondo yese, uyu munhu anotambura nhamo yake, neimwe nzira Antonio Machado achimutungamira kuenda kunechirevo chekuti "chero anozviita, anozvibhadhara."
Ndiye wechipiri mwanakomana waAlvargonzález, uyezve mumwe wemhondi dzababa vake. Zvekare, Machado anounza hunhu "hwakaipa" hwausinganzwiri tsitsi asi uchifungira. Nemaziso asinganzwisisike uye nehunhu husina chokwadi, ine magumo akafanana neepfuura.
Miguel ndiye gotwe mumhuri. Kusvika panguva iyoyo, anga asina kugara navo asi, mushure mekukurukurirana nezveramangwana rake, sezvo anga asingade kuita monki, anobva pamba. Paanodzoka, zvinhu zvinopinda mukuita.
Mune iri basa, zvakare vakadzi vevana vane zvimwe zvinoenderanaAsi iwo anongova zvishongedzo zvine hunhu hwakaenzana sevarume vavo. Muchokwadi, munyori haavape izwi rakawanda kana kuvhota.
Chii icho munyori anoda kuburitsa semhedzisiro?
Campos de Castilla hausi mutambo chete unoudzwa humhondi. Inotaura nezvenyaya ine nzvimbo ine humhondi, asi zvakare kuti iripo kururamisira kwaMwari, ndiko kuti, kana mumwe munhu akaita chiito chakaipa, munguva pfupi inotevera kana paya panouya chirango pachiri.
Nekudaro, tinogona kutaura kuti Campos de Castilla muenzaniso wechirevo chinoti «ndiani anozviita, anoripa», uko mushure mekuponda, mhondi pachadzo dzinopedzisira dzotora mushonga wadzo sezvo dzisingakwanise zvavaida pakutanga.
Zvisinei, Machado haangotarise chete pane iyi nyaya, asi zvakare anotaura nezvevamwe, mune imwe nzira yakavharidzirwa, se "kurwara kwerudo" kune mai avo, pavanorasikirwa nemurume wavo, vanosuwa; kana godo negodo pavana vanomutsa kuuraya kwababa.
Kunyangwe pakupedzisira, munyori taura zvekuzvidemba nezvavakaita.
Nei uchifanira kuverenga Campos de Castilla
Campos de Castilla ibhuku rinoedza tsanangura kuti chero mhando yechiito, chakanaka kana chakaipa, chine mhedzisiro. Kunokatyamadza zvikuru hapana mubvunzo kupondwa kwababa mumaoko evana vake chaivo, uye kuti ava "vanourayiwa" sei pakupedzisira ne "kutonga kwaMwari."
Nekudaro, zvinoenda zvisingaonekwe kuti nyaya yemwanakomana mudiki inoshanduka sei. Anobva pamba nekuti anoda kutevera moyo wake uye baba vake vafunga kumupa nhaka yake kuti aite chero chaanoda. Nekudaro, anoenda kunoona nyika uye anodzoka, kwete murombo, asi anofara uye akafumiswa maererano netsika nemufaro. Naizvozvo, zvakare izvo zviito zvakanaka, vane mubairo wavo mubhuku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Kuongorora kwe «Campos de Castilla»
Sharly josari akadaro
Zvinotaridza kwandiri kuti zvinofanirwa kuve nehumwe hudzamu maererano nekuongororwa kweichi chiunganidzwa chemadetembo chinonyatsobva paMazuvano kugadzira nzira yeChizvarwa che '98 kuburikidza nemutauro wakapusa uye kugadzirisa matambudziko pamberi peDECADENCE YA SPEINI
Pindura Sharly Josari
Pfupiso ye "Nhoroondo yezvikwiriso" naAntonio Buero Vallejo